Ahoana ny fomba hamoronana doka Snapchat | Martech Zone
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, Snapchat dia nitombo hatrany amin'ny 100 tapitrisa mahery eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny horonantsary maherin'ny 10 lavitrisa nojerena isan'andro. Miaraka amin'ny isan'ny mpanaraka marobe amin'ity rindrambaiko ity isan'andro, dia gaga ny orinasa sy ny mpanao dokambarotra mirohotra mankany Snapchat hanao dokambarotra amin'ny tsenany lasibatra.
Ny Millennial dia misolo tena ny 70% n'ny mpampiasa rehetra ao amin'ny Snapchat Miaraka amin'ny fandaniam-bolan'ny mpivarotra 500% bebe kokoa amin'ny millennial noho ny hafa rehetra dia tsy azo lavina ny fiatraikany. Mampalahelo fa mbola manandrana mivarotra olona an'arivony taona maro ny orinasa toy ny nataony tamin'ny taranaka taloha; na izany aza, toy ny taranaka rehetra, ny millennial dia manana filàna sy filàna tokony ho takatry ny mpivarotra hahomby amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo.
Ireo tranonkala media sosialy toa ny Facebook sy ny Instagram dia nanararaotra ny tobim-pahaizan'izy ireo goavambe hanintonana ireo marika mitady hanao doka an-taonany maro. Na dia nijanona elaela kokoa aza ny Snapchat teo amin'ny sehatry ny dokam-barotra, ny fampiharana malaza izao dia mamela ny olona rehetra manomboka amin'ny orinasa lehibe ka hatrany amin'ny orinasa eo an-toerana hanao doka amin'ny sehatra misy azy ireo.
Misy fomba telo voalohany ahafahan'ny marika mampiasa Snapchat hahatratrarana ireo mpanjifa mety hitranga: Snap Ads, Geofilters Sponsored, ary lens lens. Eo anelanelan'ny safidy telo ireo, ny orinasa dia manana fahalalahana mamorona amin'ny fomba tian'izy ireo hametraka ny marika mifototra amin'ny mpanjifa kendreny.
Doka safidy 1: Snap Ads
Snap Ads dia doka 10 segondra, skippable napetraka ao anelanelan'ny tantara Snap. Afaka mipaoka ny Snapchatters rehefa mijery ny doka amin'ny horonan-tsary na lahatsoratra lava hahazoana fahalalana bebe kokoa. Ny vintana dia ny fahitanao ireo doka ireo eo amin'ny fizotry ny tantara, fa ahoana no fomba hamoronana azy?
Ho an'ny orinasa lehibe kokoa, Snapchat dia mitahiry an'ity safidy dokambarotra ity ho an'ireo manana safidy fandaniam-bola bebe kokoa. Snapchat dia manana ekipa mpiara-miasa azonao ifandraisana amin'ny alàlan'ny mailaka PartnerInquiry@snapchat.com.
Doka safidy 2: Geofilters tohanan'ny
Geofilters tohana dia efijery azo soloina azonao apetraka ambonin'ny Snap miorina amin'ny toerana misy anao. Ity fampiasa ifandraisana ity dia manome ny Snapchatters fotoana hanehoana amin'ny mpanaraka azy ireo hoe aiza izy ireo ary inona no ataony. Araka ny Data data ao anaty Snapchat, Geofilter iray tohanana Nasionaly tokana dia mahatratra 40% ka hatramin'ny 60% ny Snapchatters isan'andro any Etazonia. Vokatr'ity fanatonana sy fitaomana lehibe ity, Snapchat dia nanjary safidy dokambarotra manintona indrindra amin'ireo orinasa lehibe kokoa.
Na izany aza, tsy voafetra amin'ny orinasa lehibe kokoa ny Geofilters. Satria mora adika ireo doka ireo, dia nanjary nalaza teo amin'ireo orinasa kely sy olon-tsotra izy ireo, na manao fampielezan-kevitra nasionaly na manao fety tsy ampoizina ho an'ny namanao ianao, Geofilters tohana dia fomba iray tsara ifandraisana amin'izao tontolo izao. .
Mamorona Geofilter tohana
Design - Rehefa manomboka mamolavola ny geofilter an-tserasera ianao dia hahita safidy roa. Azonao atao ny misafidy "Ampiasao ny anao", izay amoronanao ny volanao manokana avy amin'ny rangotrao amin'ny alàlan'ny modely Photoshop na Illustrator nomen'ny Snapchat. Na, azonao atao ny "Mamorona an-tserasera" ary misafidy ny safidin'ny sivana arakaraky ny fotoana (izany hoe fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fankalazana, fampakaram-bady sns). Na inona na inona safidy safidinao, alao antoka fa hamaky ny Fanoroan-kevitra an-tsoratra ho an'ny famaritana amin'ny fizotry ny fotoana, ny fitsipika ary ny haben'ny sary!
Map - Eo amin'ny sehatry ny sarintany dia angatahina ianao hisafidy ny vanim-potoana iainana ny sivana .. Ho fitsipika, tsy avelan'ny Snapchat hiaina mandritra ny 30 andro mahery ny sivana. Mandritra ny dingana an-tsarintany, dia hisafidy ny faritra sy ny toerana misy ny geofilter anao koa ianao. Mametraha tsotra fotsiny ny "fefy" amin'ny sari-tany mba hahitanao hoe ohatrinona ny vidin'ny geofiltero arakaraka ny taribeny.
Purchase - Rehefa avy namolavola sy nanao sarintany ny geofiltero ianao dia halefanao ho dinihina. Snapchat dia hamaly ao anatin'ny iray andro fiasana. Rehefa ankatoavina dia mividiana ny Geofilter anao ao amin'ny tranokalan'i Snapchat ary miandry azy handeha mivantana!
Safidy fanaovana dokam-barotra 3: Lensehevitra tohana
Ny safidy dokam-barotra Snapchat fahatelo izay azon'ny marika ampiasaina dia ny Lensehevitra Sponsored. Ny solomaso dia singa iray ahafantarana ny tarehy ao amin'ny Snapchat izay ahafahan'ny zavakanto mamorona sosona eo ambonin'ny tavan'ny mpampiasa iray. Ireo solomaso ireo dia miova isan'andro ary tsy mitombina sy fanahy iniana toa ny tadiavin'i Snapchat.
Na dia ny Snapchat aza no anaovan'ny ankamaroan'ireto solomaso ireto dia afaka mamorona sy mividy solomaso ho an'ny tanjona dokam-barotra ny orinasa. Na izany aza, satria lafo be ny mividy solomaso tohana, matetika no tsy mahita afa-tsy lantom-panazavana ho an'ny marika lehibe kokoa toa ny Gatorade na Taco Bell isika.
Na dia toa tsy misy dikany aza ny fandaniana $ 450K - $ 750K isan'andro amin'ny fampielezan-kevitra Snapchat, orinasa lehibe dia nanaporofo fa ny fampiasam-bola amin'ny solomaso misy tohana dia misy valiny lehibe. Ny "Super Bowl Victory Lense" an'i Gatorade dia nilalao in-60 tapitrisa mahery, ary nirehareha tamin'ny fomba fijery 165 tapitrisa! Vokatr'izany dia nahita fiakarana 8% amin'ny fikasana hividy i Gatorade.
Miorina amin'ireo isa ireo dia mazava fa tsy mampino ny mety hitrangan'ny Lensa Sponsored. Noho ny vidin'ny vidiny lehibe mifandraika amin'izy ireo, ny Snapchat dia nametra ny mason-tsivana tohanan'ny marika lehibe kokoa manana teti-bola lehibe. Na izany aza, raha sendra misy $ 450K- $ 750K mandry ianao ary te-hanao Fanamafisam-peo, dia mifandraisa amin'izay Mpiara-miasa amin'ny Snapchat na mandefa mailaka azy ireo ao amin'ny PartnerInquiry@snapchat.com. Ireo mpiara-miombon'antoka dia hanampy anao amin'ny dingana rehetra amin'ny paikady fampielezan-kevitra manome sosokevitra mamorona sy mamaly izay mety anananao ..
Miaraka amin'ny ivon-toeran'ny mpampiasa lehibe sy ny safidy fanaovana dokambarotra mamorona, Snapchat dia voaporofo fa sehatra tena ilaina tokoa ho an'ireo orinasa amin'ny endriny sy habe rehetra mba hifaneraserana amin'ny mpihaino kendreny. Raha mikasa hetsika iray ianao na mamoaka vokatra vaovao dia diniho ny iray amin'ireo safidy voalaza etsy ambony ary manomboka mahita ny fiovam-po mihombo!
Tags: millennialsdokambarotra hainganadoka snapchatdokambarotra snapchatsnapchat geofiltersolomaso snapchatdokambarotra snapchat snaplantom-peo tohanan'ny snapchat
Ahoana ny fomba hanamboarana ny dalam-barotra ho an'ny fitomboan'ny vokatra
Jan 27, 2017 ao amin'ny 3: 33 AM
Nanontany tena aho raha manana fahalalana momba ny famoronana lantihy Snapchat ianao, izay rindrambaiko ampiasain'izy ireo? mety ho fantatrao angamba.